घर-प्राविधिक जानकारीमा लेजर र आईपीएल कपाल हटाउने फाइदाहरू - शेन्जेन नो स्मार्ट स्मार्ट निर्माण प्रौद्योगिकी कम्पनी लिमिटेड
घरमा लेजर र आईपीएल कपाल हटाउनेका फाइदाहरू
समय: 2019-09-05 हिट्स: 218
अधिक र अधिक घर आईपल कपाल हटाउने उत्पादनहरु को लोकप्रियता संग, शेन्ज़ेन नोबल प्लेटिनम र सबैलाई घर मा लेजर र आईपीएल कपाल हटाउने को फाइदा संक्षेप गर्न।
लेजर कपाल हटाउने घरले वरपरको छालालाई हानी नगरी कालो कपालहरूलाई लक्ष्य गर्दछ। लेजरहरूको प्रकृतिको अर्थ यो छ कि यसलाई साना क्षेत्रहरूमा फोकस गर्न सकिन्छ वा यसलाई कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने आधारमा ठूलो क्षेत्र कभर गर्न सकिन्छ। घरमा आईपीएल कपाल हटाउने एकदम सटीक छैन किनकि प्रकाश लाई पोशमा केन्द्रित गर्न सकिदैन, जस्तै लेजर क्यान। यद्यपि यसले अझै पनि उच्च वर्णकको क्षेत्रलाई लक्षित गर्दछ जस्तै निष्पक्ष छालाको विरूद्ध कालो कपाल, त्यसैले यो त्यति सटीक नभए पनि, आईपीएल अझै प्रभावकारी छ।
प्राय: बिरामीहरूले and र between सत्रहरू बीच स्थायी कपाल झर्ने समस्याको साथ लेजर कपाल हटाउने घर अत्यन्तै प्रभावकारी हुन्छ। तर यो याद राख्नु महत्वपूर्ण छ कि विभिन्न प्रकारको कपालहरू फरक रूपमा प्रभावित हुन्छन्। फ्यायर कपालले अधिक सत्रहरू लिने छ किनभने प्रकाशलाई अवशोषित गर्न यसले लामो लिने छ र फोलिकुल बिग्रन अधिक ऊर्जाको आवश्यक पर्दछ। तपाईंको आफ्नै उपकरणको स्वामित्वको फाइदा भनेको यो तपाईं आफूले चाहे जति पटक गर्न सक्नुहुनेछ, बढि अपोइन्टमेन्टहरूको लागि भुक्तान नगरी।
लेजरको प्रत्येक नाडीले एक सेकेन्डको अंशमा बहु हेयरलाई लक्षित गर्दछ। यसको मतलब त्यो खुट्टा जस्ता ठूला क्षेत्रहरू मात्र एक घण्टामा पूर्ण गर्न सकिन्छ। थप सोच्नुहोस् तपाईले बचत गर्ने समयको बारे सोच्नुहोस् जब तपाईलाई नियमित सेभ गर्ने वा मोम अपोइन्टमेन्टहरू मार्फत बस्न आवश्यक पर्दैन।
समय भन्दा बढी लागत
तपाईको आफ्नै लेजर कपाल हटाउने घर उपकरण प्रयोग गर्नु धेरै सैलून अपोइन्टमेन्टहरूको लागि भुक्तान गर्नु भन्दा धेरै बढी लागत प्रभावी छ। तपाईले अबदेखि नियमित वेक्सिंग वा रेजर / डिपिलेटरी क्रिममा पैसा खर्च गर्नुपर्दैन। तपाईंको जीवनको क्रममा, तपाईं यी चीजहरू खरीद नगरी धेरै पैसा बचाउनुहुनेछ।
कुनै बढि ईन्ग्राउन कपालहरू
यो कपाल हटाउने विधि ईrग्रउन कपालबाट पीडित व्यक्तिहरूको लागि राम्रो विकल्प हो, साथै जससँग संवेदनशील छाला वा मेक्सिंग वा रेजर जलेको जलनबाट जलन हुने खतरा हुन्छ।
कुनै ग्रो-आउट टाइम्स छैन
मोमिंग र थ्रेडि withको साथ तपाईले कपाल प्रभावकारी हटाउनका लागि शिष्ट लम्बाइ नहुन्जेल कुर्नु पर्दछ, घरमा लेजर वा आईपीएल कपाल हटाउँदा, तपाई जतिसक्दो उपचारको बिचमा दाढी गर्न सक्नुहुन्छ।
घरको लेजरमा वा आईपीएल कपाल हटाउने क्रममा घर प्रणालीमा किन्नको लागि सम्झनु पर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि सबै फरक छन्। के एक व्यक्ति को लागी काम गर्छ अर्को व्यक्तिको लागि काम नगर्न सक्छ।
जब तपाई स्थायी कपाल हटाउन सक्षम हुनुहुनेछ, प्राय जसो तपाईले यसलाई कायम राख्न माथिल्लो उपचार आवश्यक हुन्छ। तपाईको छाला र कपालको प्रकार कस्तो छ भनेर पनि बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ र कुन उत्पादन तपाईको लागि र तपाईको इलाकामा उपचार गर्न चाहानु हुने क्षेत्रका लागि उत्तम हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्छ।
जबकि घर उपकरणमा एक घर लेजर / आईपीएल कपाल हटाउन को शुरुवात लागत उच्च हुन सक्छ, लामो अवधि यो धेरै सस्तो मा काम गर्दछ र धेरै समय बचाउँछ!
थप रूपमा, घर आईपल कपाल हटाउने उपकरण मिनी, पोर्टेबल, सुरक्षित र प्रभावी देखिन्छ, र आराम आश्वासन। हाम्रो सौन्दर्य प्रेमको लागि सयौं हजारौं प्रकाश जीवन एक राम्रो फिट हो। एक लगानी, लाभ जीवनभर, एक पटक र सबैको लागि हो।
अघिल्लो: सतर्कताहरू तपाई आईपीएल कपाल हटाउने उपकरणका लागि कती जान्नुहुन्छ? （Next）
अर्को: घर आईपीएल कपाल हटाउन को लागी चरणहरू